Tubular Double Warp Bulk Bag Abakhiqizi | I-china Tubular Double Warp Bulk Bag Factory kanye nabahlinzeki
I-Tubular Double Warp Bulk Bag HT-32
Lo mklamo omusha womzimba we-tubular ulungele kahle njengokukhethwa okungeyona i-liner kwezinto ezinhle nezenziwe nge-hygroscopic. Kubuye kube yinto enhle kakhulu kunokwakhiwa kwesikhwama senqwaba yamaphaneli amane
Isakhiwo se-tubular siqeda izingxenyeni eziseceleni, ngaleyo ndlela sithuthukise ukubonwa nokumelana nomswakama. Ibhande le-Cross-Corner design lilungele ukusebenza kwe-forklift.
Tubular Double Warp Bulk Isikhwama HT-30
Ukwakhiwa kwamathumbu kuqeda izingqimba ezisemaceleni, okuholele ekuthuthukiseni ukumelana nokuhlunga nokuswakama. I-blet ye-Cross-Corner design ivumela ukufinyelela okulula kwe-forklift.
Izikhwama zekhoneni ezinqamulelayo zithungelwe izihibe emzimbeni wendwangu enkulu, kwesinye isikhathi kungezwa ungqimba oluqinisayo lwendwangu. Lapho ukuma kwamasongo wokuphakamisa kubalulekile, lezi zikhwama zikhethwa kuqala. Lo mklamo ungasetshenziselwa yonke iphethini yokuthunga, i-inlet / i-outlet design kanye nezinketho ezahlukahlukene zokuvalwa.
I-Tubular Double Warp Bulk Bag HT-29
Izikhwama zekhoneni ezinqamulelayo zithungelwe izihibe emzimbeni wendwangu enkulu, kwesinye isikhathi zengezwa ngokuqiniswa kwendwangu mpo. Lezi zikhwama ziyathandwa lapho umumo weluphu ophakamisa uba obalulekile. Lo mklamo utholakala ngayo yonke iphethini yokuthunga, i-inlet / i-outlet design kanye nezinketho ezahlukahlukene zokuvalwa.
I-Tubular Double Warp Bulk Bag HT-51
Lo mklamo omusha womzimba we-tubular ulungile njengenketho engenamikhono yezinto ezinhle nezenziwe nge-hygroscopic. Futhi kuyindlela enhle kakhulu yokwakhiwa kwesikhwama senqwaba yamapaneli amane.
Izikhwama eziyinqwaba ze-tubular zenziwe nge-polypropylene elukelwe yaba isiyingi. Izinto eziyindilinga bese ziyasikwa ziye kubude obufunayo bese phansi, phezulu (uma kucacisiwe) bese kuthungwa imichilo emzimbeni ongenamthungo wesikhwama. Ngemuva kokwehlisa inani lezinsika, izikhwama zenqwaba eziyindilinga ngokujwayelekile ziyisinqumo esingcono kakhulu sokuqukethe umkhiqizo we-powdery ocolekile noma oyimbudumbudu. Baphinde babe nethuba lokusebenzisa kalula umnyango njengoba izintambo zizozimela zodwa.
Tubular Double Warp Bulk Isikhwama HT-50
Isikhwama senqwaba se-Tubular senziwa ngendwangu elukelwe ku-loom eyisiyingi, ebese isikwa ibude obufanele bokuphakama kwesikhwama esinqunyiwe, ngaleyo ndlela kususwe izingxenyana eziqondile ezinhlangothini zesikhwama ngasinye. Idizayini yomzimba oyishubhu ilungile njengenketho engenamicikilisho yezinto ezinhle nezisetshenzisiwe. Kubuye kube yindlela ehle kakhulu yokwakhiwa kwesikhwama samaphaneli amane okuqala.
Tubular Double Warp Bulk Isikhwama HT-49
Ubukhulu: ububanzi busuka ku-50cm buye ku-260cm
I-FIBC iyaphinde isebenze kabusha lapho impilo yayo yokusebenza isiphelile, okwenza kube ngumkhiqizo olungele i-eco. Isikhwama sinezinto zokuphakamisa ezihlanganisiwe ngenxa yokuthi awekho amaphalethi noma ukupakisha kwesibili okudingekayo ukuphatha. Lokhu kunikeza ukonga okukhulu ezindlekweni zokuhamba nezokugcina. I-FIBC ephrintiwe futhi isebenza njengebhodi lokukhangisa eliphathekayo elikhuthaza izinkampani, imikhiqizo futhi libonisa umkhiqizo obalulekile nokuphatha imininingwane.
Tubular Double Warp Bulk Isikhwama HT-48
Tubular Double Warp Bulk Isikhwama HT-47
Indwangu: indwangu ephindwe kabili ye-warp kusuka ku-120gsm kuye ku-500gsm
I-Tubular Double Warp Bulk Bag HT-45
I-Flexible Intermediate Bulk Container, edume kakhulu ngeJumbo Bag, iBig Bag noma iBulk Bag yisiqukathi esakhiwe kakhulu nge-polypropylene esetshenziselwa ukupakisha ngobuningi kusuka kuma-500 kgs kuya kuma-5000 kgs. Ingathwala isisindo sayo izikhathi eziphindwe ka-1000. Le ndlela yokupakisha eguquguqukayo isetshenziselwa ukupakisha ukudla, imithi yokwelapha, amakhemikhali, umanyolo, usimende neminye imikhiqizo eminingi. Kungenziwa ngezifiso ukuhambisana nezicelo ezahlukahlukene njengoba isikhwama esiqinisekisiwe se-UN sisetshenziselwa ukuthuthwa kwempahla enobungozi, ukuhlunga isikhwama sobufakazi sempushana enhle kanye nesikhwama sokwehliswa kwe-electrostatic ukugwema ukuqhuma kothuli.